रोमी ३ - पवित्र बाइबल [नेपाली बाइबल 1914]
पोलिस १९७५ पोलिश १९१०
सर्बियन १८६५ सर्बियन् लैटिन १८६५
बुल्गेरियन १९४० बुल्गारिया १९१४
चेक २००९ चेक Ekumenicky चेक Kralichka १६१३ चेक Kralichka १९९८
अजरबैजान १८७८ अजरबैजान दक्षिण
स्लोभेनियाली २००८ स्लोभेनियाई १८८२
लातवियाई LJD लातवियाई Gluck
हंगेरी १९७५ हंगेरी Karoli १५८९
फिनिस १९३३ फिनिश १७७६ फिनिश १९९२
नर्वेजियन १९३० नार्वेजियन १९२१
स्वीडिश लोक १९९८ स्वीडिश १९१७ स्विडिश १८७३
ग्रीक १७७० यूनानी GNT १९०४ यूनानी आधुनिक १९०४ यूनानी १९९४
जर्मन १९५१ जर्मन Elber १९०५ जर्मन लुथर १९१२ जर्मन १५४५
डच १६३७ डच १९३९ डच २००७
डेनिस १९३१ डेनिश १८१९
फ्रान्सेली १९१० फ्रेन्च Darby फ्रेन्च यरूशलेम फ्रेन्च Vigouroux बास्क
इटालियन CEI १९७१ इटालियन ला नियोवा डायोडाटी इटालियन Riveduta
स्पेनिश १९८९ स्पेनी १९०९ स्पेनिश १५६९
पोर्चुगिज १९९३ पुर्तगाली अल्मेडा १६२८ पुर्तगाली अल्मेडा १७५३ पोर्तुगल CAP पोर्तुगल VFL
पापुआ न्यू गिनी १९९७ पापुआ न्यू गिनी टोक प्यान्ट
टर्की HADI २०१७ टर्की १९८९
हिन्दी HHBD हिन्दी २०१० गुजराती कन्नड मलयालम मराठी Оdia तामिल तेलुगु
नेपाली १९१४ नेपाली तामाङ २०११
फिलिपिन्समा १९०५ सेबुआनो टागालोग
खमेर १९५४ खमेर २०१२
अफ्रिकी होसा जुलु सोथो
अम्हारिक १९६२ अम्हारिक DAWRO अम्हारिक GOFA अम्हारिक GAMO अम्हारिक टिग्रीन्या Wolaytta
बंगाली २००१ बंगाली २०१७
उर्दू २००० उर्दू २०१७ पंजाबी
अरबी NAV अरबी SVD
फारसी १८९५ फारसी दारी २००७
इन्डोनेसियाली १९७४ इंडोनेशिया BIS इंडोनेशिया TL इंडोनेशिया VMD
वियतनामी ERV २०११ वियतनामी NVB २००२ भियतनामी १९२६
चिनियाँ सरलीकृत १९१९ चिनियाँ परम्परागत १९१९ चीनियाँ सरलिकृत नयाँ २००५ चिनियाँ परम्परागत नयाँ २००५ चीनियाँ पारंपरिक ERV २००६
जापानी १९५४ जापानी १९६५
कोरियाली १९६१ कोरियाली KLB कोरियाली TKV कोरियाली AEB
अंग्रेजी ESV अंग्रेजी NASB अंग्रेजी NIV अंग्रेजी NLT अंग्रेजी Amplified अंग्रेजी Darby अंग्रेजी ASV अंग्रेजी NKJ अंग्रेजी KJ
अरमाइक ल्याटिन ४०५ एस्पेरान्तो कपटिक कपटिक Sahidic
एक वर्ष बाइबल
दिन को पद
यसकारण के यहूदीहरूमा अन्य गैर-यहूदीहरूमा नभएको कुरा छ त? खतनामा के विशेषता छ?
हो, यहूदीहरूसँग धेरै विशेष कुराहरू छन्। मुख्य कुरा यो होः परमेश्वरले आफ्ना शिक्षाहरूबाट यहूदीहरूलाई विश्वास गर्नु भयो।
यो सत्य हो कि कतिपय यहूदीहरू परमेश्वरको आज्ञाकारी थिएनन्। तर त्यसले के परमेश्वर भाकल पूरा गर्न रोक्नेछ?
अहँ! परमेश्वर सत्य भएरै रहनु हुन्छ, सबै मानिसहरू झूटो भए पनि। धर्माशास्त्रमा लेखिएको छः “तिमीहरू आफ्ना वचनमा सच्चा प्रमाणित हुनेछौ जब बोल्दछौ अनि तिमीहरूले जित्नेछौ जब तिनीहरूको न्याय हुनेछ।” भजनसंग्रह 51:4
जब हामी गल्ती गर्छौ, त्यसले परमेश्वर सही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अझ स्पष्ट पार्दछ। यसकारण के हामी भन्न सक्छौ कि परमेश्वरले हामीलाई दण्ड दिनु हुँदा उहाँ बेठीक बनिनु हुन्छ? म मानव विचारको अनुसार बोल्दैछु।
होइन! यदि परमेश्वरले हामीलाई दण्ड दिन सक्नु भएन भने, उहाँले संसारलाई न्याय गर्न सक्नु हुन्न।
कुनै मानिसले भन्न सक्ला, “जब म झुटो बोल्छु, यसले परमेश्वरलाई अझै बडी महिमा दिँदछ, किनभने मेरो झूटले परमेश्वरको सत्यलाई प्रकट गर्दछ। यसकारण म किन पापीको रूपमा न्याय गरिनु?”
तब हामी भन्न सक्छौ, “हामीले दुष्ट काम गर्न पर्छ ताकि असल चीज आउला।” कतिपय मानिसहरूले हामीलाई निन्दा गर्दै भन्छन् कि हामी नै त्यस्तो कुरा सिकाउँछौ। ती र्भत्सना हुनै पर्छ।
यसकारण हामी यहूदीहरू के अन्य मानिसहरू भन्दा श्रेष्ट छौ? होइन, कदापि छैनौं। हामीले पहिल्यै भनिसकेका छौं कि यहूदीहरू र गै-यहूदीहरू सबै समानरूपले पापको शक्ति मुनि छौं।
धर्मशास्त्रले भन्दछः “त्यहाँ पापरहित मानिस कोही छैनन्। एउटै पनि छैनन्!
त्यहाँ कोही बुझकी मानिस छैनन्। त्यहाँ परमेश्वरको खोजी गर्ने एकैजना पनि छैन।
सबैले परमेश्वरपट्टि पीठ फर्काएका छन् अनि सबै बेकम्मा भएका छन्। असल कर्म गर्ने कोही छैन। एकैजना पनि छैन।” भजनसंग्रह 14:1-3
“मानिसहरूका मुख खुल्ला चिहानहरू जस्ता छन् तिनीहरू आफ्ना जिब्रोले अरूलाई धोका दिंदछन्।” भजनसंग्रह 5:9“तिनीहरूले जुन कुराहरू भन्दछन् ती सर्पका विष जस्ता हुँदछन्।” भजनसंग्रह 140:3
“तिनीहरूका मुखहरू श्राप र तीतोपनले परिपूर्ण छन्,” भजनसंग्रह 10:7
“तिनीहरूका खुट्टा हत्या गर्नमा छीटो कुद्‌दछन्।
जता-जता तिनीहरू जान्छन् त्यहाँ सर्वनाश र विपत्ति ल्याउँदछन्।
तिनीहरू शान्तिको बाटो जान्दैनन्।” यशैया 59:7-8
“तिनीहरूमा परमेश्वरको डर र सम्मान छैन।” भजनसंग्रह 36 : 1
हामी जान्दछौं कि व्यवस्थाले भने झैं, त्यो व्यवस्थाकै अधीनमा हुनेहरूलाई हो। यसले सारा मानवीय बहानाहरूको अन्त गर्नेछ सम्पूर्ण संसारलाई परमेश्वरको न्यायको अधीनमा ल्याउने छ।
किनभने व्यवस्थालाई पछ्याएर कोही पनी परमेश्वरको अघि धर्मी हुन सक्तैन। व्यवस्थाले हाम्रो पापलाई मात्र औंल्याउँछ।
तर अब व्यवस्था बिना नै मानिसहरूलाई धार्मिक बनाउने परमेश्वरको नयाँ बाटो देखा परेको छ। व्यवस्था र अगमवक्ताहरूले हामीलाई त्यस नयाँ बाटोको विषयमा भनेका छन्।
परमेश्वरले हामीलाई येशू ख्रीष्टमा विश्वासको माध्यमद्वारा धर्मी बनाउनु हुन्छ। परमेश्वरले कुनै पक्षपात बिना नै सबैलाई धर्मी बनाउनु हुन्छ जसले ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ।
सबै मानिसहरूले पाप गरेका छन् अनि परमेश्वरको महिमासम्म पुग्न चुकेका छन्।
मानिसहरू परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा धर्मी बनाइए। यो सित्तैको उपहार हो। येशू ख्रीष्टको माध्यमद्वारा परमेश्वरले मानिसहरूलाई पापबाट मुक्त गराउँदै धर्मी बनाउनु हुन्छ।
परमेश्वरले हामीहरूका पापहरूको छुटकाराको निम्ति येशुलाई पठाउनु भयो। तिनीहरूका विश्वासको कारणले परमेश्वरले येशूका रक्तद्वारा मानिसहरूलाई पापको क्षमा दिनुहुन्छ। उहाँ धार्मिक हुनुहुन्छ भन्ने देखाउनलाई परमेश्वरले यसो गर्नु भयो। आफ्नो धैर्यको कारणले परमेश्वरले मानिसहरूलाई तिनीहरूले गरेका पापहरूको निम्ति सजाय दिनु भएन।
अहिले पनि उहाँ धार्मिक नै हुनुहुन्छ भन्ने देखाउन परमेश्वरले यसो गर्नु भयो। परमेश्वरले यस्तो देखाउन गर्नुभयो कि उहाँ न्यायी हुनुहुन्छ र येशूमा उनीहरूको विश्वासद्वारा मानिसहरूलाई धार्मिक पनि बनाउन सक्नु हुन्छ।
यसकारण हामीले आफैले त्यस्तो घमण्ड गर्ने कुनै ठाउँ छ? अहँ, कुनै ठाउँ छैन। किन ठाउँ छैन? किनभने यो विश्वासको मार्ग हो अथवा व्यवस्थाको मार्ग हो।
किन? किनभने हामी विश्वास गर्दछौं कि एउटा मानिसलाई व्यवस्था विनै विश्वासद्वारा धार्मिक बनाइन्छ। अनि हामी यही विश्वास गर्छौ।
परमेश्वर यहूदीहरूका मात्र परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँ गैर-यहूदीहरूका पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ।
परमेश्वर एउटै मात्र हुनुहुन्छ। उहाँले यहूदीहरूलाई तिनीहरूका विश्वासद्वारा धर्मी बनाउनु हुनेछ। त्यसरी नै गैर-यहूदीहरूलाई पनि तिनीहरूको विश्वासद्वारा धर्मी बनाउनुहुनेछ।
यसकारण हामीले विश्वासको बाटोमा लागेर व्यवस्था नष्ट गरिदिनु? होइन! विश्वासले हामीलाई त्यही बनाउँछ जुन व्यवस्थाले चाहन्छ।
© Beblia २०१८